Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem]
Myanmar IT Resource Forum » HELP ZONE » » Hardware Problems » Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem]
1 Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 13th June 2010, 8:37 pm
သိရင်ပြောပေးပါနော်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.] [You must be registered and logged in to see this image.]
Last edited by Fox on 6th August 2011, 12:00 am; edited3times in total (Reason for editing : မြန်မာစာကို space ခြားပြီးရိုက်ပေးပါ)
2 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 14th June 2010, 1:36 pm
့Hardisk က မပျက်ဖူးသေးတော့ မပြောတတ်ဘူးဂျဒါလေးတော့ဖတ်ကြည့်ပါဦး...
disk drives can still give off signs that they are about to fail. Including:
Drive LEDs that never go off. There's no relationship between overt computer activity and hard
disk drive activity, as indicated by the drive LED. But if the LED used to come
on intermittently and now glows constantly, something is very wrong and is
Disk takesalong time to come up. A hard disk drive that takesalong time to boot up is working
hard. Maybe it's working hard becausealot of stuff needs to be initialized.
But it could also be trying to compensate for intermittent read/write failures.
Disk cannot locate file table. If the disk can't find the Windows Master File Table (MFT),
especially after an unexplained crash, the disk is almost certainly dying.
CHKDSK shows bad sectors. Bad sectors used to beafact of life. Not any more. These days,
any bad sectors showing up with chkdsk or similar disk test utilities usually
mean the disk is going away. This is doubly true if the number of bad sectors
is increasing, even very slowly.
Running hot. All drives get warm, but
if the hard disk drive itself is running unusually hot compared to others in
the enclosure, it is probably nearly the end of its useful life.
Consider the drive's history. A hard disk drive that has been dropped ontoahard surface
(running or not) or else has overheated should be regarded with suspicion. It's
a good candidate for failure. Overheating usually occurs when an enclosure's
main fan or fans fail, allowing temperature to build up. If the system gets hot
enough that you start getting read-write errors before the problem is spotted and
fixed, there'sagood chance the lifespan of the drives has been drastically
3 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 16th June 2010, 10:07 am
ကျွန်တော်တော့ ပျက်ဖူးတယ်..... ကျွန်တာ့် Hard disk ပျက်ကာနီးတုန်းကတော့ Window တက်ရင်
အရမ်းကြာလာပါတယ်.... ပြီးတော့ CD တို့ DVD အခွေတွေထည့်လိုက်ရင် စက်ကဟန်းသွားပါတယ်...
ပြီးတော့ Hard disk ကအသံတွေအရမ်းမြည်ပါတယ်........... format ချပြီးဝင်းဒိုးပြန်တင်တာတောင်
သာမန် 10မိနစ်လောက် ချရတဲ့ ဟာကို နာရီဝက်တစ်နာရီလောက်ကြာပါတယ်.......
4 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 19th June 2010, 8:02 pm
ဟဲ ဟဲ စရွှီးတော့မယ် [You must be registered and logged in to see this image.]
Harddisk ပျက်တာက အမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
electronic ပို်င်း/ Curcuitက ပျက်တာမျိုးဆိုရင် Harddisk က detect မသိတော့ပါဘူး။
အဲဒါဆိုရင်တော့ သူနဲ့ အမျိုးအစားတူ၊ model တူတဲ့ Curcuit ကိုပြန်လဲပေးလို့ရပါတယ်။
အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ Detect တော့သိတယ် အလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အတွင်းပိုင်း/mechanical ပို်င်းကပျက်တာဆိုရင်တော့ ပြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ အတွင်းပိုင်းက ဖြစ်တတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကတော့ Harddisk ကအသံတွေမြည်လာတယ် ပြီးတော့ Data တွေကို ခေါ်လိုက်တဲ့အခါမှာ ကြာသင့်ချိန်ထက်ပိုပြီးကြာလာပါတယ်။ အဲသည်အချိန်မှာ Harddisk လည်သံကို နားထောင်ကြည့်ရင် ရပ်သွားလိုက်၊ လည်လိုက်ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ တချို့harddisk တွေကတော့ အဲသည်အခြေအနေလောက်မှာ မှေးသုံးရင်ရနိုင်ပေမယ့် Format ချလို့မရတော့ပါဘူး(Windows ပြန်တင်လို့မရတော့ဘူးပေ့ါ) ကျွန်တော့ Harddisk တစ်လုံးမှာဆိုရင် C: D: နှစ်ပိုင်းပိုင်းထားပါတယ်
စက်အရမ်းလေးနေလို့ Windows ပြန်တင်တာ C:က format ချလို့မရတော့ပါဘူး။ D: မှာလဲတင်လို့မရတော့ပါဘူး။ အဲဒါနဲ့ partition magic ကိုသုံးပြီး Harddisk တစ်ခုလုံးကို unpartition space ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ harddisk ရဲ့အစပိုင်း 20GB လောက်ကို ကျော်ပြီးတော့မှ Partition ပိုင်းပြီး Windows တင်တာ ရသွားပါတယ်။
ကြုံဖူးတာလေးကိုပြောပြတာပါ၊ မှားရင်စိတ်ဆိုးနဲ့နော် [You must be registered and logged in to see this image.]
5 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 28th June 2010, 11:07 pm
HDD အသစ် တစ်လုံးမှာတွေ့ဖူးတယ်။
Windows install လုပ်ပြီး application Run ရင် program window ရဲ့ ဒေါင့် တွေမှာ မဲနေတဲ့ Error မျိုးတွေ့ဖူးတယ်။ အမျိုးမျိုးစမ်းပြီး နောက်ဆုံး HDD ဖြုတ်လဲလိုက်မှ အဆင်ပြေသွားတယ်။
နောက်တစ်လုံးက ကျွန်တော့် computer က HDD ၊ အရင်ကတော့ အကောင်းပဲ သွားလေရာယူသွားတော့ ခုဏကလို Error မျိုး ဖြစ်လာတယ်။ ခုထိတော့ ပျက်သေးဘူး။
နောက်ပြီး အသံတွေ ထွက်လာရင်လည်း ပျက်ခါနီးပြီးပေါ့။
1. Low-level format နဲ့
2. High-level format ဆိုပြီး နှစ်မျိုးရှိတယ်။
HDD မှာ bad sector တွေများလာပြီး သုံးလို့မရတော့တဲ့ အခါမျိုးမှာ Low-level format ရိုက်ပေးရင် ပြန်းသုံးလို့ရတယ်။ သိထားရမယ့် အချက်က HDD တစ်လုံးကို Low-level format သုံးခါပဲရိုက်လို့ရတယ်။ High-level format ကတော့ NTFS တို့ FAT တို့ပေါ့။
မကျေနပ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ Google ကိုသုံးပါ။
Link ကို Code ခံပြီးရေးသားပေးပါရန် (ET- ပြင်ဆင်ပြီး)
6 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 18th July 2010, 4:07 am
Harddisk ကိုစက်မှာ ဒီအတိုင်တတ်ပြီး bios ထဲမှာ detect သိမသိ၀င်ကြည့်ပေးပါ.......
dectect သိတယ်ဆိုရင် windows ပေါ်ရောက်ရင် disk manger ထဲမှာ drive letter ပေါ်ရဲ့လားစစ်ပေးပါ
ပေးတယ်ဆိုရင် အခြေအနေ က ၅၀ % ရှိ တယ်........
မပေါ်ဘူးဆိုရင်တော့ harddisk ပျက်တာ
ပြီးတော့တစ်ခုက hardisk ကို clean installation လုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ လုံးဝကို format ရိုက်လို့မရတော့တဲ့အခြေနေမျိုးဆိုရင်တော့သေချာနေပါပီ။ပျက်ပီသာမှတ်တော့။
ဝင်းဒိုးတင်တာ installation နှစ်မျိုးအစားရှိပါတယ်။အောက်မှာဖတ်ပေးပါ။
ရှင်းအောင်ပြောရင်တော့ CLEAN INSTALL ဆိုတာကကျွှန်တော်တို့ဝင်းဒိုးတစ်ခုတင်ပြီဆိုပါတော့ INSTALLATION ခွေနဲ့ HARDISK ကို FORMAT ရိုက်ပြီးဆိုပါတော့ဗျာ!
UPGRADE INSTALLATION ပိုင်းဆိုတာက ကျွှန်တော်တို့လက်ရှိဝင်းဒိုး XP သုံးတယ်ဆိုပါတော့ XP VERSION ကနေမြင့်တဲ့ WINDOW -7 VERSION ပြောင်းတာကိုဆိုလိုတာပါ။
7 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem] on 30th August 2010, 9:06 pm
partition C,D မှာ များသောအားဖြင့် C မှာပဲ window တင်ကြတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် C မှာ window တင်တာ မရတော့ hard drive မကောင်းဘူးဆိုပြီး စိတ်လျှော့လိုက်ရော။ အဲဒါနဲ့ i က D ဘက်ကနေပတ်တင်လို်က်တယ်။ အဆင်ပြေသွားတယ်။ ပြီးတော့ window ထဲမှာ C ကိုလည်း သုံးလို့ရသွားတယ်။
8 Re: Harddisk ပျက်ရင်တွေ့ရတတ်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို သိပါသလားခင်ဗျာ။ [Problem]